Inona no ho hita ao amin'ny Liechtenstein | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao Liechtenstein
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Liechtenstein
Liechtenstein dia mety tsy ho anisan'ny toerana tianao indrindra raha ny momba ny fialantsasatra, fa raha iray amin'ireo mandeha be dia be ianao ary maniry hahita Zoro eropeana miaraka amin'ny tantara sy karisma maro, ity no firenenao. Miresaka momba ny firenena bitika iray isika izay tena Principality of Liechtenstein, ary izany no firenena fahenina kely indrindra manerantany, ary kely indrindra miteny alemà.
Tanànan'ny tanàna iraika ambin'ny folo izy io, ary misy curiosities mahaliana maromaro, toa an'io amin'ny faritra alpine iray manontolo, na ny antsasaky ny faritany misy azy dia habaka voajanahary. Tsy isalasalana fa mety ho fitsidihana mahaliana be izany, ary raha misy toerana tsy tokony ho adino, dia tsy maintsy tononintsika ny Vaduz, renivohiny, ary Schaan, ny tanàna lehibe indrindra, izay horesahintsika avy eo.
Ity tanàna ity no Renivohitra Liechtenstein, ary eo no misy ny fianakavian'ny mpanjaka, ao amin'ny trano mimanda antitra izay eo amin'ny faritra avo indrindra. Tranobe nitarina sy nohamafisina tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, mandra-pahatongan'ny fisehoany ankehitriny. Mampalahelo fa nakatona ho an'ny mpitsidika ao anatiny ny tranobe, saingy misy fitsangatsanganana voalamina izay afaka manome topy maso momba ity trano ity sy ny tantarany.
Raha mandehandeha mamaky ny tanàna isika, dia misy zavatra maro tsy tokony hohadinoina, toy ny tanànany taloha tsara tarehy, izay misy trano fisakafoanana izay nitondra antsika sakafo mahandro mandritra ny taonjato maro, toa an'i Gasthof Löwen. ny Museum of Art no zava-dehibe indrindra an'ny maha-tompon'andraikitra, ary manana ny fanangonana manokana tsy miankina tranainy indrindra amin'ny firenena iray manontolo. Ankoatr'izay, ao amin'ny National Museum dia azo atao ny mankafy mianatra momba ny tantaran'ity firenena eropeana kely ity.
Raha misy zavatra tiantsika hatao indray mandeha any Liechtenstein dia ny mankany an-tendrombohitra izany. Firenena iray izay feno faritra be tendrombohitra tanteraka, noho izany dia hisy mponina any an-tendrombohitra miaraka amina firazanana sarotra itoviana, ary iray amin'izany i Malbun. Any amin'ny Alpes no misy azy, ary ao amin'ny lalana manelanelana an'i Steg sy Vaduz, ka mety fitsidihana tsara io aorian'ny fahitana ny renivohitra. Izy io dia toeram-pitsangatsanganana an-tendrombohitra izay mandray tsara ireo mpizahatany mandavantaona, na dia mandritra ny ririnina aza ny vanim-potoana avo.
Tanàna kely misy an'i ivon-toerana nakatona ho an'ny fifamoivoizana izay ahafahanao mandeha mangina. Misy asa soratra taloha milaza fa tamin'ny ririnina i Malbun dia an'ny matoatoa taloha, na dia tsy misy zavatra hafa lavitra amin'ny fahamarinana aza ankehitriny, satria ivon-toerana fizahan-tany tanteraka io. Ao amin'ny fiantsonany no ahitanao fiakarana seza sy fiakarana ski, ary 23 kilometatra ny tehezan-ski. Misy ihany koa ny ski any Nordic sy ny hazakazaka toboggan, ary koa ny fandaharana manokana ho an'ny ankizy mandritra ny vanim-potoana avo lenta.
Raha manohy miaina ny fanahin'ny mpiorina an-tendrombohitra marina indrindra isika, dia afaka mankany amin'ny tanànan'i Triesenberg, izay anaran'ny tanàna izay nampidirina an'io tanàna io sy ny hafa toa an'i Malbun. Ity tanàna ity dia iray amin'ireo famokarana fambolena lehibe indrindra teo aloha, fa androany kosa dia nanjary a toeram-pialan-tsasatra.
Izy io dia manana toeram-pialofana ski, ary mandritra ny fahavaratra dia mitranga ihany koa izy ireo hetsika ara-panatanjahantena eo amin'ny Lake Steger. Ao amin'ity tanàna ity dia azonao atao ihany koa ny mitsidika ireo tranombakoka kely ao amin'ny tranom-pinoana toa ny Church of St. Joseph's Parish, izay itahirizana ireo relikizy taloha. Ao amin'ny tanàna akaiky an'i Steg dia misy faritra fitsangantsanganana tsara ho an'ireo izay tia ity fanatanjahan-tena ity, ary koa slide ski malaza, ka azo antoka ny fialamboly.
Izany no iray amin'ireo toeram-ponenana taloha an'ny firenena iray manontolo, ary iray amin'ireo ivon-kolontsaina lehibe. Izy io no manana ny teatra manan-danja indrindra, ary azo lazaina ihany koa fa izy no iray amin'ireo tanàna mifandraika tsara indrindra, satria izy irery no manana gara any amin'ny firenena iray manontolo. Iray amin'ireo hetsika lehibe hita eto amin'ity tanàna ity ny karnavaly, izay malaza amin'ny fanjakana rehetra.
Ity no tanàna atsimo indrindra, ary io koa no akaiky indrindra an'i Soisa. Ny zava-dehibe indrindra amin'ity tanàna ity dia ny tranony taloha, ny Lapan'i Gutenberg. Izy io dia trano iray nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay toeram-ponenan'i Baron Frauenberg, mba ho an'ny Dukes of Austria. Taorian'ny fotoanan'ny tsirambina dia namidy tamin'ny mpanao sokitra iray izay nanome azy ny endriny ankehitriny, ary lasa toeram-pisakafoanana ihany io tamin'ny farany. Nikatona ho an'ny besinimaro izy io ankehitriny, saingy misy hetsika atao ao amin'ny zaridainany. Ny fiangonan'i St. Nicholas dia eo akaikin'ny lapa tokoa, ary manana fomba neo-Romanesque.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Liechtenstein » Inona no ho hita ao Liechtenstein
Nanampy ahy be dia be izany, satria handeha ho any Liechtenstein aho ary fantatro izay tokony hatao ankoatra an'i Vaduz.
Valio amin'i SAndra